Sambataa fi Dilbata darbe dorgommii atleetiksii gaggeeffameen atleetoonni Ityoophiyaa 32 ta’an milkaa’an – Fana Broadcasting Corporate
Sambataa fi Dilbata darbe dorgommii atleetiksii gaggeeffameen atleetoonni Ityoophiyaa 32 ta’an milkaa’an
Finfinnee, Sadaasa 1,2012 (FBC) – Sambataa fi Dilbata darbe dorgommii fiigicha daandiirraa gaggeeffameen atleetoonni Ityoophiyaa koorniyaa lamaaniinuu milkaa’uu himameera.
Haaluma kanaan, maaraatoonii Naanchaang Chaayinaatti gaggeeffameen, dubartootan Malkaam Gizaw fageenya sa’aatii 2 fi daqiiqa 29 sekandii 01 1ffaa, Baqqaluu Baajii sa’aatii 2:29:27, 2ffaa, Gaaddisee Naggasaa sa’aatii 2:30:30 3ffaa bahaniiru.
Maaraatoonii Haayfeen Chaayinaatti dorgomameen dhiiraan Yihuunliinyi Adaanaa sa’aatii 2:10:06 1ffaa yoo ba’u, dubartootaan, Fitaawii Zara’ay sa’aatii 2:29:15 1ffaa, Gabaanesh Ayyalaa sa’aatii 2:31:08 2ffaan xumuraniiru.
Akkasumas maaraatoonii Guyliin Chaayinaatti gaggeeffameen dhiiran,Gizaw Baqqalaa sa’aatii 2:12:14 1ffaa, dubaraan ammoo, Kabalii Caalaa sa’aatii 2:32:25 1ffaa bahuun moo’ataniiru.
Achuma Chaayinaatti maaraatoonii Naanjiingiin dubaraan Roomaan Mangiftuu sa’aatii 2:26:12 2ffaa, Itaaleem Tasfaaw sa’aatii 2:47:46 3ffaa bahuun injifataniiru.
Maaraatoonii Chaangdee Liiyuuyyee Leekin,dhiiraan Tasammaa Goobanaa fageenya sa’aatii 2:13:24 1ffaan yoo xummuru,durbaan Ammoo Daraartuu Dabalaa sa’aatii 2:44:10 1ffaan injifateetti.
Fiigicha Maaraatoonii Chaayinaa biroo Shaa’awooziingiin, Makkoonniin Balaxaa sa’aatii 2:17:13,3ffaa, dhalaan ammo Asnaaqachi Mangiftuu sa’aatii 2:38:15 1ffaa, Yeshiimmabeet Xaasow sa’aatii 2:41:08 2ffaa bahuun yoo injifatan fiigichi daandiirraa chaayinaa gaggeeffameen atileetoonni Ityoophiyaa 32 ta’an injifannoon galaniiru.